Agaasimaha madaxtooyada DFS oo sheegay in aysan ka qaybgali doonin wadahadalo lala yeelan lahaa Somaliland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAgaasimaha madaxtooyada DFS oo sheegay in aysan ka qaybgali doonin wadahadalo lala yeelan lahaa Somaliland
June 25, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Nuur Diiriye Xirsi. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeysay in aysan ka qaybgali doonin wadahadalo la sheegay in ay la yeelan lahayd maamulka Somaliland oo la qorsheeyay in ay ka dhacaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Qoraal uu soo dhiggay boggiisa Twiitter-ka agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Nuur Diiriye Xirsi ayuu ku sheegay in aysan jirin wakiilo katirsan Soomaaliya oo shirkaas ka qaybgali doona.
“Wakiilo ka socda dowladda Soomaaliya kama qaybgali doonaan kulanka la filayo in uu ka dhaco Nairobi. Si kastoo ay ahaataba, waxaanu jecelnahay in aan cadeyno in dowladda ay dhab ka tahay in wadahadal waxtarleh ay la gasho Somaliland marka la helo meel ku habboon. Ajandaha iyo ka qaybgalayaashana la isku raaco.” Ayuu agaasimaha madaxtooyada ku yiri qoraalkiisa.
Kulanka ayaa waxaa soo qaban-qaabisay haayada Center for Humanitarian Dialogue, waxaana la filayay in ay ka qaybgalaan masuuliyiin ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, iyo sidoo kale saraakiil ka socota wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya oo ay kamidtahay Turkiga.
Labadii sanno ee u dambeeyay, wadahadalada u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa hakad ku yimid.
Wadahadalo horey u dhexmaray labada dhinac ayaan wax miro dhal ah kasoo bixin.
Somaliland ayaa tan iyo 1991 ku andacoonaysay in ay ka go’day Soomaliya, balse wax aqoonsi ah kama aysan helin caalamka.
At least 7 killed in Afgoye fighting between Somali government forces and Al-Shabab
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least seven including three Somali National Intelligence Agency (NISA) forces and four Al-Shabab fighters were killed after heavy fighting erupted in Afgoye town between the Somali army and Al-Shabab on Thursday, NISA [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ku dhici doonto wakhtigeeda. “Waxaan rajeynayaa doorasho wakhtigeeda dhacda oo kalsooni lagu wada qabo oo dhammaan dhinacyada daneynaya Doorashooyinkana ay ku [...]
U.S. says airstrike in Galgaduud region kills five Al-Shabab militants
Mogadishu-(Puntland Mirror) The U.S. military said it killed five Al-Shabab militants in an airstike in Somalia, U.S. Africa Command said in a statement on Monday. The airstrike against Al-Shabab was conducted near El Burr town [...]